दलान नेपाल : फिल्मी शैलीमा ठाकुर द्धारा ‘बदला’ । किन भएन ‘निर्णायक वार्ता’ ?
फिल्मी शैलीमा ठाकुर द्धारा ‘बदला’ । किन भएन ‘निर्णायक वार्ता’ ?
at 7:31 AM Posted by Dalan
कतिपय उनी निकटस्तहरु भन्छन, २ मंसीरको वार्ता क्रममा ठाकुरलाई ओलीले यसरी अपमानित गरेका थिए, कि शायद त्यही भएर होला आफनै उपस्थिीतीमा तोकिएको निर्णयक भनिएको वार्तामा आफु सहभागी हुन नसक्ने सुचना समेत उनी आफै प्रमुख दलहरुलाई दिन आवश्यक ठानेनन ।
आज वेलुकि ६ वजे आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा, प्रधानमन्त्री र नेपाली काग्रेस विच भनिएको निर्णयक वार्ता अन्तिम समयमा आएर स्थिगीत भयो । मोर्चाका तर्फ वाट तमलोपा सहअध्यक्ष हृदेश त्रिपाठीको नेतृत्वमा मोर्चाको वार्ता टोली सदस्यहरु वार्ताका लागी जान दुई घण्टा पुर्व दिउसो चार वजे प्रधानमन्त्रीको कार्यलय वाट सवै सदस्यहरु लाई फोन आयो, आजको वार्ता प्रधानमन्त्रीज्यूले स्थिगीत गर्नु भएको छ । कतिपय मोर्चाका वार्ताटोली सदस्यले किन स्थिगीत भयो भनेर समेत सोध्न भ्याए । प्रतिउत्युरमा फोन कर्ता प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दहालको एक लाईनको जवाफ थियो, केहि टेक्निकल कुराहरु मिल्न बाकी छ, त्यही भएर । के प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले भने जस्तै केहि टेक्निल कुरा नमिलेरै आजको वार्ता स्थिगीत भएको हो त ? प्रधानमन्त्री स्वयंम आफनो टिवटर मार्फत आजको वार्ता स्थिगीत भएको र भोली विहान काग्रस, एमाले र एमाओवादीको बैठक बस्ने र बैठकले मोर्चाको ११ बुदे माग वारेमा साझा धारणा वनाउदै वार्ताको अर्को समय तोकिने उल्लेख गरेका छन । गएको सोमवार वालुवाटारमा भएको मोर्चा र प्रमुख तीन दलको वैठकमा मोर्चाले आफनो ११ बुदे मागको वारेमा तीन दलको प्रष्ट धारणा नआए वार्ताका लागी वस्नुको कुनै औचित्य नभएको बताएका थिए । त्यस पछि काग्रेस, एमाले र एमाओवादी तीनै पार्टीले वुधवार आफुहरु ठोस अवधारणा सहित आउने बताउदै निर्णयक वार्ता गर्ने भनेर उठेका थिए । कतिपय भित्रियाहरुका अनुसार मोर्चा र प्रमुख तीन दलहरु विच चलीरहेको अनौपचारिक कुराकानीमा संघियताको मुद्धामा कुरा नमिलेकै कारण वार्तामा यसरी बिलम्व भईरहेको देखिन्छ । कतिपय स्रोतका अनुसार आज विहानै पनि प्रधानमन्त्रीको तर्फवाट एमालेका केहि नेताहरु मोर्चाका केहि नेताहरु संग यस वारेमा सम्वाद गरेका थिए ।
सोमवारको बालुवाटार बैठकमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख दलहरुका नेताहरु माथी कडा आक्रोश पोखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले त्यही दिन जसरी भए पनि आज राती सम्म बसौ र कुरा मिलाउ पनि भन्न भ्याए । तर काग्रेसले १ दिन थप छलफल गरौ त्यस पछि बसौला भनेर समय मागे पछि आज वुधवारको वेलुकीको लागी वार्ताको समय तोकियो । आज मोर्चाको धनुषाको दल्केवरमा आमसभा कार्यक्रम छ भन्ने थाहा पाएरै प्रधानमन्त्रीले वेलुकिको समयमा वार्ताको समय तोकेका थिए । कि मोर्चा कम से कम ठाकुर सहित केहि शिर्ष नेताहरु सहभागी हुन पाउछन भनेर । तर ठाकुरले प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख दलहरुलाई विना कुनै सुचना मंगलवार मधेश झरे । उनी शनिवार मात्रै काठमाडौ फर्कने छन ।
ठाकुरका कतिपय निकटस्तहरुका अनुसार गएको २ मंसीरमा प्रधानमन्त्री ओलीले ठाकुरलाई पुरै आश्वास्त पारेर नराम्ररी झुक्याएका थिए । उक्त घटना उनी खिन्न मात्रै होईन कि ओली सरकार रणनिती रुपमा वल प्रयोग गरेर अघि वढन खाजेको भन्दै मोर्चाको कतिपय आन्तरिक रणनितीहरुलाई समेत चुस्त बनाउन कडा निर्देशनहरु दिए ।
छठ अघि नै मोर्चाका शिर्ष नेताहरु छठ सम्ममा सरकारसंग सार्थक वार्ता नभए आफुहरु त्यस पछि थप कडा आन्दोलनमा होमिने उदघोष गरेका थिए । कार्तिक १५ मा ओली सरकार संग वार्तामा मोर्चाले आफनो १५ बुदे माग समेत पेश गरेका थिए । तर त्यसकै भोली पल्ट विरगंजमा प्रहरी कारवाही भए पछि औपचारिक वार्ता प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो । तर अनौपचारिक कुराकानी विभिन्न स्तरमा चली नै रह्यो ।
दिपावली पछि खासगरी एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री ओली र तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर विच एक चरण उच्च स्तरीय कुराकानी भयो । त्यस पछि आन्तरिक रुपमा हौसिएका ठाकुर फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तमसपाका अध्यक्ष महेन्द्र यादव र सदभावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलाई काठमाडौ वाट वाहिर नजान भने । त्यही भएर यी नेताहरु छठमा समेत मधेश झरेनन । अनौपचारिक कुराकानी यती माथी सम्म पुग्यो संघियता सहितको सवै विषयमा कुरा मिलेको भनियो । २ मंसीरमा औपचारिक वार्ताको समय पनि तोकियो । अनौपचारिक छलफलकै अनुसार १ मंसीरको विहानै प्रधानमन्त्रीको एक नेता फेरी ठाकुर काहा आएर छलफलहरु गरेर संविधान संधोशनको प्रस्ताव नै मोर्चालाई वनाएर दिन भनियो । ठाकुरले ती नेतालाई दिउसो सदभावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण संग भेटेर लिन भने । ठाकुरले त्यती वेलै कर्णलाई फोन गरेर संविद्यान संशोधनको खाका वनाउएर एमालेका एक नेताले फोन गर्दा उपलब्ध गराई दिन भने । कर्ण संशोधनको खाका वनाएर वेलुकि ६ वजे सम्म सिंहदरवारको संसदीय दलमा कुर्दा पनि कसैले फोन गरेनन । त्यस पछि उनी ठाकुरलाई आफुलाई अहिले सम्म कसेले फोन नगरेको भन्दै त्याहा वाट निस्केका थिए । कर्णले उक्त सुचना दिने वितिकै ठाकुरको दिमागमा चिसो पसेको थियो र प्रधानमन्त्रीले धोका दियो भन्ने लाग्यो र भयो पनि त्यसै । भोली पल्टै विहान काग्रेसले आफुहरुलाई अहिले सम्म कुनै जानकारी नै नभएको सार्वजनिक गरे । त्यसको भोली पल्टै स्वयंम प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको एमालेको पोलिटव्युरोले सघियताको सिमांकनमा कुनै हेरफेर नगर्ने निर्णय गरे ।
यसरी ठाकुरले प्रधानमन्त्रीले आफुहरु वार्ताको नाममा नराम्ररी मुर्ख बनाएको महसुस भयो । उनले कतिपय आफना निकटतम समकक्ष मनको वह पनि पोखे, हेर्नुस यी एमालेका नेताहरु माओवादी संग १२ बुदे हुदा पनि जहिले पनि भाडन मात्रै खोजेका थिए, अहिले पनि उनीहरु कुनै राजनितीक निकास निक्लान भन्ने आफुलाई विश्वास नभएको बताएका थिए ।
त्यस लगतै मोर्चाको वैठकले आन्दोलनको समिकक्षा गर्दै राजमार्ग केन्द्रित कार्यक्रमहरु बनाएका थिए । ५ मंसीर देखि राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन चर्किए पछि फेरी ठाकुर सहित मोर्चाका कतिपय शिर्ष नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीले वोलाउने प्रयास गर्न थाले । ठाकुरले संवादवाट पछि हटनु हुन्न भन्ने उदेश्यका साथ अनौपचारिक कुराकानीहरु वाट पछि हटेन तर प्रधानमन्त्री समकक्ष पहिलो शर्त नै थियो काग्रेस सहितको छलफल हो्ुस भनेर । केहि अनौपचारिक कुराकानीहरु पश्चात गएको सोमवार वालुवाटार वैठक डाकिएको थियो ।
सम्भवतह त्यही अपमानित महसुस भएर होला ठाकुरले सोमवार अली भावुक तर कडा रुपमा वालुवाटारमा प्रस्तुत भएका थिए । कतिपय उनी निकटस्तहरु भन्छन, २ मंसीरको वार्ता क्रममा ठाकुरलाई ओलीले यसरी अपमानित गरेका थिए, कि शायद त्यही भएर होला आफनै उपस्थिीतीमा तोकिएको निर्णयक भनिएको वार्तामा आफु सहभागी हुन नसक्ने सुचना समेत उनी आफै प्रमुख दलहरुलाई दिन आवश्यक ठानेनन । वरु आफना नेता त्रिपाठीलाई वार्तामा गएर प्रमुख दलहरुको अवधारण बुझन जिम्मेवारी दिए । सरकारी पक्षले अवधारणा बनाएर अर्को वैठक गर्न भने पनि आज मोर्चाका शिर्ष नेताहरु नआउने भए पछि प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख दलहरुको प्रमुख नेताहरु मोर्चाको दोस्रो तहका नेताहरु संग औपचारिक वार्ता कसरी गर्ने भन्नेमा अप्ठायारोमा फसेको देखिन्छ । यद्यपी विभिन्न स्तरमा अनौपचारिक कुराकानी चाही जारी छ । ठाकुर सहित मोर्चाका शिर्ष नेताहरु आज धनुषाको ढल्केवरमा आयोजना गरिएको विशाल आमसभामा सहभागी भएका थिए ।